Wararka Maanta: Sabti, Mar 31, 2018-Isku socodkii dadka iyo gadiidka Muqdisho oo dib u soo noqday
Sabti, Maarso, 31, 2018 (HOL) –Waxaa dib u bilaawday isku socodkii dadka iyo gadiidka qeybo ka mid ah jidadka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho, kaddib markii ay saakay bulshadu ku waabariisatay jidadka oo gabi ahaanba xiran.
Ciidamo isugu jira kuwa Militariga, Booliiska iyo Nabad-sugida ayaa xalay la dhigay qeybo ka mid Isgoysyada ugu muhiimsan caasimada kuwaa oo siweyn ula socday dhaqdhaqaaqa iyo nabad-galyada guud ahaan magaalada.
Foojignaanta ciidamada ayaa lala xiriirinayay kulan maanta la filayay in xarunta Golaha Shacabka ay ku yeeshaan xildhibaannada Baarlamaanka, hasse ahaatee u baaqday codsi ka yimid madaxweynaha dowladda Soomaaliya.
Markii uu soo baxay warka ku saabsan in dib loo dhigay kulankii xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa la arkayay qeybo ka mid ah magaalada gaar ahaan jidadka ugu muhiisan oo loo fasaxayo in dadka iyo gadiidku isticmaali karaan.
Dadweynaha reer Muqdisho ayaa xaley-ba ku sii talagalay in maanta magaaladu kala xirnaan doonto, iyadoo qof walba uu qorshihiisu ahaa in uu bal si dhaw ula socdo waxa ka soo yeeri doona xarunta Golaha Shacabka marka ay isugu tagaan xildhibaannada.